एसईओ माईन्ट मार्केटिंग संग के छ?
उद्देश्य संग मार्केटिंग संग एसईओ र सामाग्री को संयोजन को बारे मा सबै छ. कहिलेकाहीँ मिश्रित भएमा, एसईओ र सामग्री मार्केटिंग एक अपराधी हतियार बन्यो जुन तपाईंको व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धाको भीडबाट खडा हुन मद्दत गर्दछ।.
2017 मा, बैठक र कन्वर्ट ग्राहक माग तपाईका ब्रान्डलाई दृश्यात्मक, उत्साहजनक र ग्राहकहरु लाई अपील गर्न को लागी सबै कुरा हो।. यद्यपि अधिकांश मानिसहरू सोच्न चाहन्छन् कि उनीहरूको छनौट तथ्याङ्क र तर्कमा आधारित हुन्छन्, भावनाहरूले अझै पनि रोजगारी निर्णय गर्नमा अभिन्न भूमिका खेल्छ. मानिसहरू अनुभवहरू सम्झन्छन्, पाठ होइनन्. यही कारणले तपाइँका दर्शकहरूको साथ अनुमोदित पाठहरू सिर्जना गर्ने सामग्री सामग्री सगाईको कुञ्जी हो.
सामग्री एसईओ मार्केटिंग रणनीति को एक प्राथमिक घटक हो
पछिल्लो केहि सालों मा, किनन को खरीदारी को सबै भन्दा पसंदीदा तरीकाहरु मा अनलाइन खरीदारी हो. यो मुख्य कारण हो किनकि तपाईंको वेबसाइटको सामग्री जहाँ सम्भावित ग्राहकहरू संलग्न हुन र आकर्षित गर्न जहाँसम्म सम्भव हुन सक्दछ. सौभाग्य देखि, तपाईं एसईओ र सामग्री मार्केटिङ प्रयासहरूलाई एक प्रकार्यमा संयोजन गरेर सजिलै यो उद्देश्य पुग्न सक्नुहुनेछ.
सम्झनुहोस्, खोज इन्जिन अनुकूलन सामग्री खोजको लागि महत्त्वपूर्ण छ. तपाईंले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा भनेको व्यवसायिक उद्देश्य स्थापित गर्ने किवर्डहरू को पहिचान हो. यस डेटाले तपाईलाई ग्राहकहरूको इरादालाई अझ राम्ररी बुझ्न मद्दत पुर्याउनेछ जुन, तपाईले मूल सामग्री उत्पन्न गर्न मद्दत पुर्याउनेछ जुन धेरै परिवर्तन गर्न सम्भव छ.
सामग्री एसईओ संग एसईओ कसरी संयोजन गर्ने?
ध्यान राख्नुहोस्: एक प्रभावकारी सामग्री अनुकूलन कार्यक्रम विकास गर्न धेरै समय र प्रयासहरू लाग्छ. सिल्लल्ट विशेषज्ञहरूले सिफारिस गर्छन् कि तपाइँ यी सिद्धान्तहरूलाई विचार गर्नुहोस् जब तपाईंको उत्तम सामग्री अनुकूलन योजना निर्माण गर्दा:
निम्नलाई सम्झना सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो: तपाइँको सबै ब्रान्डहरू, उत्पादन, सेवा, अनुभव र मार्केटिङ रणनीति सहित, ग्राहकको वरिपरि घुमाउनुपर्दछ. लक्षित श्रोताहरूलाई परिभाषित गर्दा तपाइँलाई प्रासंगिक विषयहरूमा रोमाञ्चक सामग्री सिर्जना गर्न मद्दत पुर्याउछ जुन तपाईंको ग्राहकका आवश्यकताहरू ठीकसँग सम्बोधन गर्दछ.
यो एक सुनहरा नियम हो: यदि तपाईका दर्शकहरूको प्रेरणा बुझ्नुहुन्छ भने, त्यहाँ अधिक संभावनाहरू छन् जसले तपाइँलाई प्रभावकारी सामग्री प्रदान गर्दछ जसले राजस्व, वृद्धि बढाउन मद्दत गर्दछ र दीर्घकालिक स्थिरता बढाउन मद्दत गर्दछ।.
सामग्री अनुकूलन को महत्व
नोट: तपाईंले सिर्जना गर्नुभएको सामग्रीको प्रत्येक टुक्रा अवस्थितको कारण हुनुपर्छ. सामान्यतया, सामग्रीको उद्देश्य सूचित, शिक्षा र मनोरञ्जन हो. सामाग्री रणनीति सिर्जना गर्दा उद्देश्य राख्नुहोस्.
अर्को चरण अधिकतम दृश्यताको लागि सामग्री अनुकूलन गर्दैछ. सेल्टल्ट विशेषज्ञहरूले सिफारिस गर्छन् कि तपाइँले तपाइँको साइटको सामग्री अनुकूलित गर्दा निम्न सुझावहरू प्रयोग गर्दछन्:
चासो, व्यवहार र जनसांख्यिकीको आधारमा अपील गर्ने रोचक र सान्दर्भिक विषय छनौट गर्नुहोस्;
सही खोजशब्दहरू समावेश गर्नुहोस्;
मोबाइल उपकरणहरूको लागी तपाईंको सामग्री अनुकूलित गर्नुहोस्.
अर्को सुझाव गुणस्तरमा छैन, मात्रामा. सम्झनुहोस्, अधिक सामग्रीले राम्रो सामग्रीको अर्थ बुझ्दैन. यो स्पष्ट छ कि मान्छे बहुमूल्य सामग्री उपभोग गर्न चाहन्छ जुन व्यक्तिगत, सान्दर्भिक र उनीहरूको लागि सहयोगी हो.
बेहतर प्रदर्शन को लागी तपाईंको परिणामहरु लाई मापें
जस्तै कि उनि भन्छन्, जो कि मापा छैन. सौभाग्य देखि, यी दिन तपाईं मेट्नको ट्रयाक गरेर केवल केही क्लिकहरूको विषयमा सामग्री प्रदर्शन जानकारी प्राप्त गरेर सजिलै संग आफ्नो ROI निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ।.
तपाईं प्रत्येक सामाग्री अभियानबाट सिक्न सक्नुहुन्छ, चाहे यो प्राप्त वा आफ्नो लक्ष्य विफल. तपाइँले राम्रो तरिकाले सामग्री खडा गरेको के हो भनेर निर्धारण गर्न मद्दत गर्ने उपाय र निगरानी. त्यसो गरेर, तपाईं सफल तरिकाहरू को दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ, यसैले तपाईंको बेहतर एसईओ मार्केटिंग रणनीति सुधार गर्न.
तपाईले देख्न सक्नु भएको छ, एसईओ र सामग्री मार्केटिंग को संयोजन तपाइँको साइट ट्राफिक को बढाने को लागि सबै भन्दा राम्रो तरिका हो र उच्च गुणवत्ता को सुराग को आकर्षित गर्न को लागी एक राम्रो तरीका हो। Source . माथि उल्लेख गरिएको रणनीतिहरूको पालना गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् तपाईको वेबसाइट रैंकिंगमा के हुन्छ?